Madaxda Maamul goboleeedyada oo isku raacay dhismaha ciidamo gaar ah oo isku dhaf ah… – Hagaag.com
Madaxda Maamul goboleeedyada oo isku raacay dhismaha ciidamo gaar ah oo isku dhaf ah…
Hoggaamiyayaasha maamul-gobolleedyada oo uu shir uga socday magaalada Garoowe ayaa isku raacay dhismaha ciidamo gaar ah oo isku dhaf ah,kaddibna loo isticmaali doono xoreynta deegaanka ay gacanta ku hayaan al-Shabaab.
Maamul-gobolleedyada ayaa sidoo kale isku raacay in la dhiso golaha amniga oo hormuud ka noqon doona arrimaha amniga dowlad-gobolleedyada,iyadoo la isku darayo ciidamo ka mid ah Daraawiishta dowlad-gobolleedyada oo marka la isku dhafo yeelan doona hoggaan mideysan.
Ciidamadda isku dhafka ah ayaa muddo labo bilood ah loo qabtay dowlad gobolleed kasta inuu ku soo biiriyo kun askari ,ciidanka oo la sheegay inay tababar wadajir ah qaadan doonan,kaddibna si wadajir ah u howlgallayaan.
War-murtiyeedka shirka ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyay in la abuurayo sanduuq dhaqaale amni oo mideysan kaas oo lagu maalgalin doono miisaaniyadda ku baxaysa ciidamadda.
Lama oga sida uu ku suura geli karo go’aankan, maamulada labo ka mid ah waxaa fooda ku soo haya doorasho oo aan la ogeyn cidda ku soo bixi doonta, hadaanan jirin qorshe ku shubasho aheyn.